Isu tinoenderera mberi neashoma stock muApple Watch Series 4 LTE | Ndinobva mac
Kunyangwe Apple ichiedza kuwedzera kugadzirwa kwemawachi akangwara, zvinoita sekunge hazvigoneke kuyera zvitoro muzvitoro uye vashandisi vanoramba vachiona kutenga kwechigadzirwa sezvisingabviri muzvitoro.
Isu tinofanirwa kuyeuka kuti kubvira Chishanu chapfuura, Gunyana 14, pakatanga kuchengetwa kwemawachi aya, kunonoka kuendesa kwaigona kutoonekwa kubva kumaminetsi ekutanga. Iye zvino kana anopfuura mwedzi wapfuura uye uchitarisa izvo Iwo mawatch akarova zviri pamutemo muzvitoro neChishanu, Gunyana 21 tinogona kuti takaipa kukunda pakutanga.
Kunonoka kuri kuwedzera uye hapana kuvandudzwa
Kana chimwe chinhu chakafanana chikaitika neiyo iPhone (mumakore apfuura) stock yakadzikama mushure memwedzi, mwedzi nehafu, chimwe chinhu chinoratidzika kunge chinogona kuitika izvozvi neApple Watch Series 4 ine zuva rekutumira. yaNovember 20 - 27 nhasi. Izvi zvinofungidzira kunonoka kwemazuva mazhinji kana mushandisi achida kutenga wachi uye anoita kuti vakawanda vatofunga kuti hazvigoneke.
Izvo zvinofanirwa kuyeukwa kuti kutengesa kweiyo wachi munyika medu kwave kuri kubudirira chaiko kana isu tichifunga nezve data iro iro mamwe midhiya arikupa. Zvinotaridza kuti vashandisi vazhinji vanosarudza iyo modhi neLTE uye ndeimwe yeiyo iri kunonoka kuendesa zvakanyanya, kunyangwe chiri chokwadi kuti nguva nenguva chitoro chemuviri chinogona kuwanikwa muzvitoro uchishandisa webhu. iStocknow iyo inopa munguva chaiyo kusvika kwemidziyo mitsva kune yepamutemo Apple Chitoro. Imwe nyaya ndeyekuti imwe yeApple inochengetera padyo kana kuti munhu waunovimba anogona kuenda kunotenga wachi yedu. Parizvino zvese zvinoratidza izvo kuvandudzwa kwenzvimbo iripo yeaya maApple mawachi zvinotora nguva kuti isvike.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Isu tinoenderera mberi neashoma stock muApple Watch Series 4 LTE
Apple yaizopa ipad nyowani isina bhatani repamba muKeynote maererano neiyo iOS 12.1 beta kodhi
Maitiro ekuvhura mafaera neiyo MAFF yekuwedzera pane macOS